Singapaoro : dokambarotra maharikoriko ho an’ny Burger King · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Manuel Naudin
Voadika ny 18 Oktobra 2018 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Italiano, English
Manolotra sandwich (mofo voasesika) vaovao antsoina hoe ”Super Seven Incher” ho an'i Singapaoro ny Burger King (Fanamarihana: 7 inch = 18 sm eo ho eo) [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra anatin'ity lahatsoratra ity] . Mba hampahafantarana ity vokatra vaovao ity, nanao afisy iray izay manintona saina sy tsikera manerana izao tontolo izao ny masoivoho ray mpanao dokambarotra any an-toerana.
[FnM: afaka adika hoe ”Hampanidina anao” ny It'll blow your mind away]
Notsikeraina ilay dokambarotra noho ny fampiasany soramiafina miresaka firaisana ara-nofo mba hamarotana ilay vokatra. Ity no lahatsoratra feno tamin'ilay fanambarana :
Ataovy afa-po ny fanirianao ho an'ny zavatra lava, be ranony, ary mendimendy miaraka amin'ilay BK SUPER SEVEN INCHER vaovao. Hamerina hangataka izany ianao aorian'ny fanandramanao ity sandwich mampitolagaga ity izay ahitana nofon-kena voatoto voarakotra fromazy amerikanina, tongolobe mikarepoka sy saosy A1 matevina ary betsaka.
Halefa hatramin'ny faran'ny volana ity dokambarotra ity. Maneho hevitra i Dan Mitchell :
Tena tonga dia nataon-dry zareo ”pao-droa” ny tamin'ity indray mitoraka ity. Mitsingevana amin'ny rivotra manoloana ny tarehin'ny tovovavy somary hatsatratsatra mitanaka vava izay toa matahotra ity hena mihenjana ity ilay sandwich (izay efa fahavetavetàna sahady), voarakotra mayonezy fotsifotsy tsy natoraly. Sexy kosa koa!
Manampy i So good :
Rehefa milaza aho hoe ”mahamay”, ”voasesika tsara” ary ”ankibe 7 [eo amin'ny 18 sm] eo”, inona no eritreretinao ? Aza matahotra fa tsy ianao irery no mieritreritra izany. Ary izany no tao an'eritreretr'ireo mpamolavola ity fanentanana vaovao ity, izay toa tsy nahatohitra ny hevitra sy ny sarina vehivavy minono hena mirefy 18 cm. Raha toa ka tsy takatrareo ny hevi-dalina ao anatin'ilay hevitra, nanapa-kevitra ny hampiditra tsara ilay fantsika ry zareo.
Manoratra i Garr's posterous fa adaladala sy manompa ilay filazàna :
Ao amin'ny tranonkalany, lazain-dry zareo mazava tsara izay kendreny : ”Any Singapaoro, nahatonga ireo trano fisakafoananay ho toerana fifanaovana fotoana tian'ny tanora indrindra, indrindra ireo mpianatra sy olona mavitrika” ny ravaka amerikanina mazava sy miaina. Ekena, tsy ny fianakaviana na ireo ankizy tanora izany (raha ny hevitro), fa na izany aza dia manompa ireo adolantsento sy ireo tanora matihanina foana ity fanambarana ity. Aiza ny fanajana ny mpanjifanareo? Na mody tsy raisina aza ny fomba fijery ‘vehivavy fanaka’ ao anatin'ilay fanambarana, mbola ratsy foana ity dokambarotra ity satria tena … ahoana re eh … dondrona be ilay izy, tsy mba mahiratsaina. Izany ve no Burger King ? Matotra ve ? Iza tamin'izy ireo ao amin'ny Burger King no nahita hoe hevitra tsara izany ?
Tsy vao voalohany iampangana ny dokambarotra Burger King noho ny fampiasany hevitra miafina ara-piraisana ara-nofo izao. Efa nisy ny fanentanana momba ireo vody efamira mba hampahafantarana ireo karazan-kanina ho an'ny ankizy, ilay fanentanana nanasa ny mpanjifa ”haka fafiny”, BK King [Ny mpanjakan'ny Burger King] tsy manao akanjo ambony, ary fanentanana nanondro ilay vokatry amin'ny tenin-jatovo manondro sarina taovam-pananaham-behivavy.
Namoaka ity fanambaràna ity izay mahakasika ilay fanentanana ao Singapaoro ny Burger King :
”Manome lanja ary manaja ny mpanjifany tsirairay ny Burger King Corporation. Natokana ho fampahafantarana tolotra iray voafetra ao amin'ny tsena singaporeanina ity dokambarotra ity ary tsy alefa ao Etazonia na any amin'ny tsena hafa. Novokarin'ny masoivoho ao an-toerana miorina ao Singapaoro fa tsy ny masoivoho Crispin Porter sy Bogusky voatondron'ny BKC any Etazonia.”
Manana hafatra ho an'ny Burger King i Lissa :
Azoko tsara hoe tsy natokana afa tsy ho ana tsena eny an-toerana (Singapaoro) ihany ity dokambarotra ity. Tehafako ny hazavana ara-tsaina nitazona anareo tsy handefa izany manerana ny tany. Kanefa na izany aza – Hainareo ve fa misy ity zavatra kely antsoina hoe Aterineto ity. Ahafahana miserasera miaraka amin'ny olona manerana izao tontolo izao izany – Mahagaga eh ! Ka mba toroako hevitra àry ianareo, aza manao dokambarotra toy ireny.